ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာများဖြစ်မလဲ? | Buzzy
Relationship ဆိုတာ မှန်တစ်ချပ်လိုပါပဲ...
Relationship ဆိုတာ မှန်တစ်ချပ်လိုပါပဲတဲ့။အက်ရာလေးနည်းနည်းထင်သွားတာနဲ့ အလွယ်တကူ ကွဲကြေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဂရုတစိုက်နဲ့ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့။ပြီးပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူ ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရဖို့ဆိုတာ မလွယ်မှန်းသိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တွေအားကျမိတဲ့စုံတွဲတွေရှိတယ်ဟုတ်! သူတို့ကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာပြီး သိပ်ချစ်တတ်လိုက်တာ၊ရန်မဖြစ်ကြဘူးလား၊ပြဿနာတွေမတက်ကြတော့ဘူးလား လို့ထင်ရလောက်တဲ့အထိပါပဲ။ဘယ်လို ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းမှာမှ ရန်မဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေဆိုတာမရှိပါဘူး။ပြီးတော့ အဆင်ပြေသာယာတဲ့ချစ်သူစုံတွဲဆက်ဆံရေးက အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့စိတ်နှစ်ခုက သဟဇာတဖြစ်တယ်ဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူဆက်ဆံရေးမျိုးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့သွေးမတော်သားမစပ်လူတစ်ယောက်ကိုချစ်သူတော်ထားရတဲ့အတွက် မတိုက်ဆိုင်ကြတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ ဆိုတာရှိတာပါပဲ။ဒီလိုမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်း တစ်ခြားသူတွေအမြင်မှာ သိပ်ကိုအားကျရတဲ့ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ပြီးပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့ချစ်သူစုံတွဲလေးတိုင်းမှာ တူညီတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေလည်းရှိကြပါတယ်တဲ့။ဘာတွေလဲဆိုရင်...
၁)တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်မြတ်နိုးကြလို့ တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်အမြဲတမ်းအသင့်ရှိတယ်။ချစ်သူကိုလည်း ပျော်ရွှင်အောင်ထားတယ်။
၂)ချစ်သူဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးက စကားပြောဆိုဆက်ဆံပုံမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လေးစားမှုရှိရပါမယ်။
၃)အရာအားလုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလေ့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့် နာကျင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။
၅)တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုသိလာပြီး ရင့်ကျက်မှုနဲ့ပြောင်းလဲလာကြတယ်။ တည်ငြိမ်လာကြတယ်။အချစ်လျော့သွားတာမဟုတ်တာ နားလည်ပါ။
၇)ပြီးရင် ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆို ခွင့်လွှတ်ပေးကြတယ်။စိတ်ထဲမှာတေးမှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါ။
၈)တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုအပြည့်ရှိတယ်၊အနေဝေးလို့သွေးအေးသွားတယ်ဆိုတာ စကားအဖြစ်ပဲကြားဖူးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
၉)ပြဿနာတွေကို နှစ်ယောက်အတူဖြေရှင်းကြတယ်၊တစ်ယောက်ရဲ့အခက်အခဲကို တစ်ယောက်က ၀ိုင်းကူရင်း အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေ ကျင့်သုံးကြတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေပါ။ ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်းနေမယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်သားနားလည်မှုအပြည့်နဲ့သာယာတဲ့ချစ်သူဘ၀ ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။